Tuesday July 04, 2017 - 20:34:15 in Articles by Super Admin
Dawladda Itoobiya ayaa ku wareejinaysa Raiisul Wasaare Xasan Cali Khayre Maxaabiis Soomaali ah oo tiradoodu gaarayso 120 Maxbuus, kuwaas oo ku xirnaa Xabsiyo ku yaala Dalkeeda, loona haystay Dambiyo ay ka mid yihiin Aragixisanimo.
Hornafrik ayaa dabagal ku samaysay Maxaabiistaasi la qorshaynayo in lagu soo celiyo Muqdisho oo ay Dawladda Somalia sheegatay inay iyadu Xabsiyadda ka sii daysay. Waxaana Dabagalkaasi ay Hornafrik ku ogaatay in Maxaabiistan ay yihiin kuwo ay Xukumeen Maxkamadaha Itoobiya oo si sharci ah ku dhamaystay Xabsiyadooda. Waxaana ka mid ah :-
Wariye Maxamad Aways Muudeey-Boqorka Bartamaha oo horay loogu xukumay 6 Sanno oo Xabsi ah, Cismaan Xasan Qudus oo 5 Sanno ku xukunaa, Maxamad Cali Maxamad Dhagawayne-8 Sanno, Maxamad Axmad Shire-8 Sanno, Maxamad Joon-8 Sanno, Maxamad Axmad Shire Carabka-8 Sanno, iyo kuwo kale oo loo haystay inay si sharci darro ah ku soo galeen Itoobiya iyo inay Tahriibayeen oo aan la xukumin maadaama aysan Dambiyo culus galin.
Maxaabiistan aan Magacyadooda helnay waxaa loo haystay Qarax ka dhacay Gudaha Addis Ababa, Waxayna u badnaayeen kuwo aan lug ku lahayn Qaraxaasi oo ay Itoobiya u xirtay Tuhun, kadibna Xukuno isaga riday si ay ugu muujiso Shacabkeeda inaysan baxsan kuwii Qaraxa sameeyay. Waxaana ka mida Dadka loo xiray isla kiiskan Maxamad Ibraahim Siidoow oo ku xukuman 9 Sanno, isla markaana ahaa Darawal ka tirsanaa Safaaradda Somalia ee Itoobiya, iyadoona Diblomaasigan aan la hubin inuu ku jiro Dadka la sii daynayo, maadama ay wali Itoobiyaanku ku doodayaan inuusan dhamaysan Xabsigiisa.
Maxaabiistan lagu wareejinayo Raiisul Wasaare Khayre ayaa waxaa ku jira kuwo 1 Sanno ka hor dhamaystay Xabsiga oo sugayay Musaafurin, Laakiin ay Safaaradda ay Soomaaliya codsatay in dib loogu dhigo Arrintooda Musaafurinta Maadaama waqtiga ay Xukunka dhamaysteen ay Somalia galaysay Xilli kala guur ah.
Itoobiya ayaa marka ay Maxaabiista Soomaalida ah dhamaystaan Xukunkooda waxay caadiyan u musaafurisaa Dalkooda, iyadoona aysan jirin cid kula xisaabtanta in Muwaadin Soomaali ah ay iska xirato, ku riddo Xukun Maxkamadeed, kadibna soo Musaafuriso.
ka sakoow Maxaabiistan la daynayo waxaa wali ku jira Xabsiyadda Itoobiya Maxaabiis Soomaali ah oo uu ka mid yahay Wariye Sadiiq oo ka tirsanaa BBC-da Qaybteeda Focus on Africa oo isna 20 Sanno ku jira Xabsiyadda Itoobiya, isla markaana loo diiday inay xitaa booqdaan Eheladiisa iyo Laanqayrta Cas.
Nidaamka Xabsiyadda Itoobiya ayaa dhigaya in Maxbuuska Sannad kasta ay Xabsigiisa ka go’do 4 Billood, taasoo ka dhigaysa in Maxbuuska ku xukuman 5 Sanno ay ka go’ayso 1 Sanno iyo 8 Bilood. iyadoona Xukunka Maxbuuska looga billaabo Maalinta la soo xiro.
Raiisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo hadda ku sugan Addis Ababa ayaa ku soo qoray Twitter-kiisa inuu Dalka dib ugu soo celinayo 120 Maxaabiis ah oo ay ku soo daayeen Heshiis dhex maray Itoobiya iyo Somalia. Mana uusan bixin faah faahin intaas ka badan Raiisul Wasaaruhu. Hase yeeshee Hornafrik waxay ogaatay in Maxaabiistan ayba ahaayeen kuwo Xukun dhamaystay oo sugayay oo kaliya in Dalkooda dib loogu celiyo.
Itoobiya waxay horay Xabsiyadda Dalkeeda uga sii daysay Axmad Madoobe oo hadda ah Madaxwaynaha Jubba Land, kadib markii isagoo xiran loo doortay Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Somalia, Waxay sidoo kale soo daysay Ibraahim Naaleeyo oo ka mid ah Saraakiisha Alshabaab, markii la soo daayayna Kooxdiisa dib ula midoobay. iyo Shaqsiyaad kale oo u badan Shacab ay iska xiratay.